Tamarta la cusboonaysiin karo - Cusboonaysiinta Cagaaran | Cusbooneysiinta Cagaaran (Bogga 2)
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato batteriga haydarojiin, faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa.
Dhamaanteen waxaan u isticmaalnay heerkulbeegga meerkuriga waqti ka mid ah nolosheena si aan u cabirno heerkulka jidhka. Waxay ku saabsan tahay…
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato dhulalka dhifka ah iyo astaamahooda. Halkan ka baro.
Kala daadinta xoolaha
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan burburka xoolaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin shabakadda cuntada.
Bacaha caaga ah
Qormadan waxaan ku lafagureynaa dhibaatada deegaanka ee ka jirta bacda balaastigga iyo wasakheynta ay leedahay. Halkan ka baro.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyada kala duwan ee dhuxusha, asalkeeda iyo sameyskeeda. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sifooyinka jimicsiga jirka ee biyaha wasakhda, asalkiisa iyo daaweynta. Halkan ka baro waxbadan.
Qormadan waxaan kaaga sheegi doonnaa dhammaan astaamaha, deegaamaynta, quudinta iyo taranka ubaxyada. Wax badan ka baro kalluunkan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa waxa taxanaha Cosmos ku saabsan yahay iyo asalka guushiisa. Waxbadan ka baro halkan.
Xaqiiqdii waligaa waad maqashay llama oo ka hadlaysa wixii aad ku aragtay fiidiyowyada. Waa xayawaan guri ...
Waxaan ku tusaynaa dhamaan astaamaha, deegaanka, quudinta iyo taranka isboortiga. Waxbadan ka baro arthropodkan halkan.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan noolaha noolaha, waxa uu yahay iyo sida ay muhiimka u tahay.
Maqaalkani waxaan ku tusi doonaa astaamaha ugu muhiimsan ee saqafyada qorraxda ee Tesla iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin rakibistooda.
Waxaan ku sharaxeynaa faahfaahin iyo tusaalooyin waxa iskaa wax u qabso ee deegaanku yahay, waxa ku saleysan iyo tusaalooyinka qaarkood. Baro sida loo daryeelo deegaanka.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa ay tahay marawaxadaha Kaplan, sida ay u shaqeyso iyo waxa loogu talagalay. Waxbadan ka baro tamarta korontada laga dhaliyo.
Nidaamyada qorraxda ee dadban
Maqaalkani waxaan ku tusineynaa waxa nidaamyada qorraxda ee dadban yihiin, astaamahooda, faa'iidooyinkooda iyo faa'iido darrooyinka ay leeyihiin. Halkan ka baro dhammaan waxa ku saabsan.
Kheyraadka dabiiciga ah ee aan laka maarmi karin
Waxaan ku tusineynaa waxa kheyraadka dabiiciga ee aan la koobi karin iyo faa'iidooyinka ay ka leeyihiin shidaalka. Halkan ka baro.
Qoraalkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa qas wadayaasha endocrine yihiin iyo saameynta ay ku leeyihiin caafimaadka. Waxbadan ka baro wasakheynta kiimikada halkan.
Sida loo rakibo baalayaasha ku shaqeeya cadceedda
Mashruucan waxaad ku ogaan doontaa sida loo rakibo tallaabada tallaabada qorraxda. Baro faa'iidooyinka isticmaalka tamarta qorraxda.
Qoraalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa astaamaha iyo adeegsiga marawaxadaha Francis. Halkan gal si aad waxbadan uga ogaato tamarta korontada.
Xaraashyada dib loo cusboonaysiin karo
Waxaan kuu sharraxeynaa xaraashka la cusboonaysiin karo iyo doorka ay ka ciyaaraan jiilka tamarta cagaaran ee Spain. Halkan gal si aad waxbadan u ogaato.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato sharciyada kuleylka. Wax dheeri ah ka baro fiisigiska boostadan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato bamgareynta qoraxda iyo astaamaheeda. Gali si aad waxbadan uga barato nidaamkan hal abuurka leh.
Maqaalkani waxaan ku tusineynaa rakibidda sawir-qaadashada iyo maxay yihiin faa'iidooyinka is-isticmaalka tamarta.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dusha saqafka qorraxda. Halkan u gal si aad wax uga baratid isticmaalka iyo faa'iidooyinka tikniyoolajiyaddan sawir-qaade ah.
Qormadan waxaan ku tusinaynaa waxa ay tahay beerta cadceedda iyo sida ay u shaqeyso. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato dhammaan faa'iidooyinka noocan ah ee tamarta bixiya.
Dhaxalka dabiiciga ah
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walba oo ku saabsan hidaha dabiiciga ah. Halkan gal si aad u ogaato waxa ay tahay iyo astaamaha ay yihiin.
Cawaaqibta roobka aashitada
Qormadan waxaan ku tusinaynaa waa maxay cawaaqibta ka dhalata roobka aashitada iyo sida ay u samaysmaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato waxa ay yihiin xalka suurtagalka ah.
Tamarta dabaysha ee Zaragoza
Waxaan sharaxeynaa xaalada tamarta dabaysha ee Zaragoza. Halkan gal oo ogow suurtagalnimada in la abuuro koronto oo aad ku noolaato is-cunid.
Waxaan kuu sharraxeynaa dhammaan astaamaha iyo noocyada ilaha tamarta ee adduunka. Halkan ka baro dhammaan waxa ku saabsan. Hadda soo gal!
Halkan u gal si aad u baratid waxa saameynta sawir-qaadista ay tahay iyo sida loo soo saaro. Baro sida baallayaasha qoraxda u shaqeeyaan bilowgii.
Batariyada ku shaqeeya cadceedda ayaa ku habboon isticmaalka tamarta qorraxda marka aan loo oggolaanaynin inay soo saaraan xaaladaha. Halkan ka baro dhammaantood.
Noocyada tamarta la cusboonaysiin karo
Waxaa jira noocyo badan oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Qoraalkan waxaad ku ogaan doontaa dhammaantood iyaga oo ay weheliyaan faa'iidooyinkooda ugu waaweyn. Maxaad sugeysaa
Warshad koronto ku shaqeysa: hawlgal iyo noocyo
Warshad koronto laga dhaliyo ayaa loo dhisay inay ka dhaliso tamar nadiif ah, dib loo cusboonaysiin karo biyaha keydsan. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo shaqeeyo iyo noocyada?
Qalab cadceeda ku shaqeeya
Xeedho qorraxdu waa aalad gabi ahaanba kacaan ah oo ku shaqeysa tamarta la cusboonaysiin karo. Halkan gal si aad wax uga ogaato wax walba oo ku saabsan.
Tamarta Haydarooliga waa nooc ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo oo ka faa'iideysata biyo-dhaca ku jira biyo-xidheennada. Halkan ka baro sida ay u shaqeyso.
Bamka kuleylka dhulka hoostiisa
Mashiinka kuleylka ee dhulka hoostiisa waa xulasho aad u fiican kuleylka guriga ama qaboojinta. Halkan ka baro wax kasta oo iyada ku saabsan.
Kuleylka kuleylka ayaa u adeegsada tamarta dhulka si uu u kululeeyo guriga. Baro waxa ay tahay iyo sida ay ugu shaqeyso qoraalkan.
Tamarta dib loogu cusboonaysiin karo Spain
Halkan waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato jaangooyada tamarta la cusboonaysiin karo ee Isbaanishka iyo soo dejinta iyo dhoofinta ay fulisay dalkeennu. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Astaamaha, hawlgalka iyo shuruudaha nalalka waddooyinka cadceedda ku shaqeeya
Baro sida ay u shaqeeyaan nalalka waddooyinka ee qoraxda, waa ikhtiraac kacaan oo si aad ah ugu soo badanaya magaalooyinka. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
Wax kasta oo ku lug leh dhismaha beer dabaysha
Boostada waxaad ku baran kartaa talaabooyinka la raaco iyo daraasadaha lagu sameeyo dhismaha dabaysha. Miyaad xiisaynaysaa inaad ogaato?
Tamarta kale ee ay tahay inaad ogaato
Waxaan soo bandhigeynaa ilo kala duwan oo tamar kale ah oo aan wasakheyn oo ka caawiya ilaalinta deegaanka. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
Ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo ahmiyada ay u leeyihiin mustaqbalka
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa ilaha kala duwan ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo muhiimadda ay u leeyihiin mustaqbalka tamarta. Ma rabtaa inaad mawduuca si qoto dheer u ogaato?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan shooladaha pellet
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa hawlgalka shooladaha pellet, qaybaha iyo noocyada jira. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato?
Waa maxay iyo sidee buu u shaqeeyaa tamarta kuleylka ee qorraxda
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha tamarta kuleylka, isticmaalka iyo sida rakibku u shaqeeyo. Ma rabtaa inaad wax dheeraad ah barato?
Waa maxay, sidee loo soo saaray iyo maxaa loo adeegsadaa tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' ayaa leh
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa waxa tamarta qorraxda loo yaqaan 'photovoltaic tamarta', sida loo soo saaro iyo waxa u adeegsada. Ma rabtaa inaad wax walba ka barato mowduucan?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato marawaxadaha dabaysha
Soo ogow astaamaha, hawlgalka iyo noocyada marawaxadaha dabaysha ee loo isticmaalo tamarta dabaysha. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato iyaga?
Waa maxay inverter hadda jira maxaase loogu talagalay
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha qalabka wax lagu beddelo ee hadda jira iyo sida loogu isticmaalo rakibidda qorraxda. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha ugu muhiimsan ee xirmooyinka qorraxda iyo faa'iidooyinka ay leedahay rakibideedu. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
Bamka biyaha ku shaqeeya
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha iyo isticmaalka matoorrada biyaha qorraxda ku shaqeeya. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeeyaan iyo midka ku wanaagsan baahidaada?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tamarta is-isticmaalka
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa dhinacyada ugu muhiimsan ee xisaabta lagu darsado haddii aan rabno inaan tamar ku is-cunno gurigeenna. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
Midowga Yurub wuxuu jabiyay rikoor cusub oo tamarta dabaysha ah sanadkii 2017
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa diiwaanka Midowga Yurub uu ku gaadhay adoo rakibaya qadar badan oo tamarta dabaysha ah. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Warshaddii ugu horreysay ee sabaysa tamarta qoraxda ee Nederland
Warshadda tamarta qoraxda ee sabaynaysa waxay ku taal Netherlands, tamarta qorraxda ee la soo saaray waxay 15% ka badnaan doontaa tan laga heli karo dhirta qorraxda ee dhulka waxayna dabooli doontaa 75% baahida tamarta dalka.
Waa maxay iyo sidee u shaqeeyaa warshad tamar-dhuleedka
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa waxa ay tahay warshad tamar-dhuleedka iyo sida ay u shaqeyso. Ma rabtaa inaad ogaato sida noocan ah tamarta la cusboonaysiin karo loo soo saaro iyo noocyadeeda?
Dib u cusbooneysiinta EDP waxay siin doontaa tamar dib loo cusboonaysiin karo Nestlé oo ku taal Mareykanka
Nestlé wuxuu ku biiri doonaa liiska dalal badan oo ay ka go'an tahay in dib loo cusboonaysiin karo dhirta ku taal Mareykanka Maxay yihiin shirkadaha kale ee ay ka go'an tahay dib u cusbooneysiinta? Waa maxay isha cusboonaysiinta ay isticmaalaan?
Gorona del Viento waxay maamushaa inay bixiso 1.974 saacadood oo la cusboonaysiin karo
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa diiwaanka in warshad koronto-dhalinta Gorona del Viento oo ku taal jasiiradda El Hierro ay ku gaadhay cusboonaysiinta. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Kobaca tamarta qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' ayaa kusoo laabtay Spain
Ka dib dhowr sano oo cabsi badan oo loo cusbooneysiin karo sababo la xiriira jarista Xisbiga Caanka ah, waxaad moodaa in xiisihii ay dib ugu soo laabanayaan maalgashiga dib u cusbooneysiinta, gaar ahaan sawir qaadeyaasha.Waa maxay sababta tan?
Waa wax wanaagsan in la ballaariyo bartilmaameedyada dib-u-cusboonaysiinta Yurub ilaa 35%
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa baahida Yurub ee ah in la kordhiyo bartilmaameedyada tamarta la cusbooneysiin karo illaa 35% marka la gaaro 2030.
5 sano oo aan lahayn dabayl cusub MW Catalonia
Bishii Janaayo 2013 beertii ugu dambaysay ee dabaysha ee Catalonia ayaa la furay, tan iyo markaas hal MW looma xilsaarin. Mustaqbalku sidee u egyahay? Ma jiraan jardiinooyin qorshaysan?
Kacaankii cusbooneysiin lahaa ee Chile iyo deriskeeda
Chile waxay ku jirtay kacdoon la cusboonaysiin karo dhawr sano.Maxay yihiin ilo cusbooneysiin ah oo la adeegsanayo? Ujeeddooyinkee ayay leeyihiin? Maxay yihiin dalalka kale ee Koonfurta Ameerika ku qamaaraya cusboonaysiinta?
Caqabada magaalooyinka dib loo cusboonaysiin karo
Waxaa jira magaalooyin cayiman oo leh bartilmaameedyo dib loo cusboonaysiin karo. Intooda badani waxay soo jeediyeen in magaalada la siiyo 100% Maxay yihiin, Goorma ayey doonayaan inay gaaraan ujeedada la cusboonaysiin karo?
Tamarta la cusboonaysiin karo waxay ka dhigan tahay 17,3% isticmaalka tamarta ugu dambeysa
Thanks to 3-xaraashka xaraashka ah ee la qabtay sanadihii 2016 iyo 2017, Spain waxay gaari kartaa 20% wax soo saarka la cusboonaysiin karo sanadka 2020. Waa kuwee jaaliyadaha hogaamiya?
Costa Rica waxaa la siiyaa 300 maalmood oo keliya tamarta la cusboonaysiin karo
Muddo dhowr sano ah, Costa Rica waxay tusaale u ahayd inay sii waddo gaaritaanka in ka badan nus sannad isku xigta si ay si gaar ah u keento tamar la cusboonaysiin karo, iyadoo jabisay rikoodhkeedii 300 maalmood.
Horumarka weyn ee imaan doona si kor loogu qaado tamarta la cusboonaysiin karo
Horumarka tikniyoolajiyaddu waxay kadhigeen qorraxda iyo dabaysha inay fududaato isticmaalkeedu. Qalab noocee ah ayaan isticmaali doonaa? Sideen u hagaajineynaa waxtarka?
Xaragada la cusboonaysiin karo ee Argentina
Thanks to qorshaha RenovAr, hirgelinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Argentina ayaa u koraysa sidii xumbo. Hadaf noocee ah ayaad leedahay sanadka 2025? Waa maxay nooca dhirta la rakibayo? Maxaa ugu muhiimsan?
Shiinaha ayaa la wareegay hoggaanka Yurub ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Shiinuhu wuxuu kujiraa hogaaminta yurub tamarta la cusboonaysiin karo maalgashiyadiisa culus halka suuqyada yurub ay fadhiistaan ​​ama dib udhacaan.
Galicia waxay rabtaa inay hogaamiso wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo ee Spain
Qorshaha Galicia waa in la gaaro 6 GW oo ah awood la cusboonaysiin karo oo rakibmay, taas ayaa noqon doonta tan ugu badan ee la isticmaalo?
Pamplona waxay kabidoontaa is-cunitaanka guryaha caadiga ah
Pamplona waxay soo bandhigtay qorshe tamar, ku dhowaad hal milyan oo yuuro ayaa loo qoondeyn doonaa si kor loogu qaado is-isticmaalka, horumarinta tamarta iyo keydinta tamarta. Maxay yihiin cabirkaaga yaase ka faa'iideysan doona?
Chile waxay qorsheyneysaa inay joojiso dhirta dhuxusha
Haddii siyaasaddu ayan kharribin, Chile waxay baabi'inaysaa dhirta dhuxusha laga qodayo sannadaha soo socda, dhab ahaantii sannado yar gudahood waxay labanlaabtay awooddeeda dib-u-cusboonaysiinta.Waa maxay tamarta ugu muhiimsan? Sidee ayaad u aragtaa mustaqbalka?
Guryaha ku yaal Alcalá waxay ka faa'iideysan doonaan tamarta la cusboonaysiin karo
Alcalá de Henares waxay leedahay mashruuca "Alcalá District Heating" oo ay ka faa'iideysan doonaan 12.000 oo guri iyada oo ay ugu wacan tahay tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Isbaanishku wuxuu ubaahan yahay guddi isbedelka Cimilada si uu u hormariyo kala guurka
Mawduucani wuxuu ka hadlayaa baahida loo qabo Spain inay yeelato guddi isbedel Cimilo si ay u hoggaamiso kala-guurka tamarta.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo miyay hore u ahayd faa'iido?
Suuqyada tamarta adduunka ayaa si isdaba joog ah isu beddalayay in muddo ah hada, laakiin markan waxay gaareen heer ay adag tahay in laga gudbo. Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee bilaa kabista ah miyaa horeba faa'iido u lahayd oo halkee ayay ka jaban yihiin?
Tamarta dabaysha ayaa ahayd isha ugu badan ee Spain ku biirisay bishii Janaayo
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa qadarka tamarta dabaysha laga dhaliyo Spain inta lagu jiro bisha Janaayo. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Waa kuwee dalalka reer Yurub ee hormuudka ka ah wax soo saarka la cusboonaysiin karo?
Waa kuwee waddammada horeyba ula kulmay bartilmaameedyada Yurub? Waa kuwee kuwa aan yeelin? Boqolkiiba intee le'eg ee la cusbooneysiin karo ayaa waddan kasta leeyahay? Maxay qorshooyin u hayaan inay kordhiyaan saamigooda la cusboonaysiin karo?
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa daboolay 17,3% baahida 2016
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa qadarka tamarta la cusboonaysiin karo ee Spain iyo EU ay ka dabooleen baahida guud ee 2016. Ma rabtaa inaad ogaato tirooyinka?
Shirkadaha Isbaanishka waxay doonayaan inay sharad ku galaan cusbooneysiinta
Waqtigan xaadirka ah Spain, si ka duwan dalalka kale ee Yurub sida Portugal, waxaan gaarnaa kaliya 17% ee wax soo saarka la cusboonaysiin karo. Si taas loo beddelo, gobolku wuxuu soo saaray 3 xaraash sanadkii hore, shirkaduhuna si wanaagsan ayey uga jawaabayaan waxayna rabaan inay raacaan tareenka la cusboonaysiin karo.
Faransiisku wuxuu soo bandhigayaa qorshe lagu laba jibaarayo awoodda dabaysha sannadka 2023
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa qorshaha ay Faransiisku soo bandhigtay si loo labalaabo tamarta dabaysha ee rakibtay sanadka 2023. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u fulinayaan?
Kala guurka tamarta waa in la dedejiyaa si looga fogaado isbedelka cimilada
Mawduucani wuxuu ka hadlayaa dooda ka socota Shirka Dhaqaalaha Davos ee ku saabsan baahida loo qabo in la dardargeliyo kala-guurka tamarta si loola dagaallamo isbedelka cimilada.
Qiimaha dhalinta korantada ee tirooyinka
Thanks to curve waxbarashada, kharashyada tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa si aad ah hoos ugu dhacay wax kabadanna way dhici doonaan. IRENA waxay damaanad qaadeysaa in dhammaan dib-u-cusbooneysiintu ay tartan la geli doonaan dhowr sano gudahood.
Midowga Yurub wuxuu baabi'in doonaa canshuuraha is-cunista
Midowga Yurub wuxuu u ogolaanayaa is-cunistiisa iyo iibinta wax soo saarkeeda tamarta dheeraadka ah iyada oo aan la bixin canshuuro xadgudub ah, taas oo ka hor imaaneysa canshuuraha caanka ah ee cadceedu soo saaro xisbiga caanka ah ee dalkeena.
Qiima dhimista cajiibka ah ee tamarta qoraxda
Sannadihii ugu dambeeyay qarashka ku baxa tamarta qorraxda ayaa loo yareeyay si la yaab leh, Goorma ayaa la dhimayaa marka loo barbardhigo tamarta kale?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa tamarta yar ee laga cuno ilo dib loo cusboonaysiin karo oo ku yaal Jasiiradaha Canary. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Hydropower waa isha ugu horreysa ee laga cusboonaysiin karo adduunka. Maxay yihiin dhirta ugu muhiimsan ee tamarta korontada dhalisa? Halkee ku taal? Sifooyin noocee ah ayey leedahay?
Saadaasha tamarta dabaysha sanadka 2030 sida ay sheegtay PREPA
PREPA waxay samaysay saadaalin guud oo ku saabsan mustaqbalka tamarta dabaysha Maxay tahay ujeedooyinkeedu? Maxay yihiin saadaasheeda ugu rajada badan? Intee in le'eg ayaa la rakibi doonaa? Maxay PREPA dalbataa? Qaab dhismeedka nidaaminta ayaa wax laga badali doonaa?
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa kharashaadkooda ka jari doonta ugu yaraan kalabar sanadka 2020
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa dhimista kharashyada wax soo saarka ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay dareemayaan. Goorma ayuu sarreeyaa tamartani?
APPA waxay rabtaa bartilmaameedka 35% ee dib u cusbooneysiinta oo ay ansaxisay PE
Dib-u-cusbooneysiinta APPA waxay soo dhaweyneysaa taageerada ballaaran ee Baarlamaanka ee ah 35% bartilmaameedka tamarta la cusbooneysiin karo. Intaas waxaa sii dheer, Isbaanishku wuxuu leeyahay karti iyo ilo badan oo ku filan.
Kaydadka waawayn ee Isbaanishka
Kaydadka ugu waaweyn dalka Spain. Waa maxay astaamaha farsamo ee ay leeyihiin, halkee ku yaalliin, yaa ka hawl gala, awood noocee ah ayey leeyihiin, mustaqbalkee ayaa sugaya?
Tamarta dabaysha ee sanadka 2017 iyo saadaasha sanadka 2018
Tamarta dabaysha hada waxay gacan ka geysaneysaa 20% wadarta barkada Isbaanishka. Sidee ayey tiradan u soo shaac baxday sanadihii la soo dhaafay? Sidee ayey isu beddeli doontaa mustaqbalka? Tirooyinkee ayay dhaqaaqi doontaa?
Waxay ku dhaliyaan tamar dib loo cusboonaysiin karo unug mobilada lagu magacaabo Aurora
Aurora, oo ah unug guurguura jiilka tamarta la cusboonaysiin karo ayaa awood u yeelan doona in loo qaado meel kasta oo la geeyo "arsenal" ee baalayaasha ku shaqeeya cadceedda iyo marawaxadaha dabaysha oo soo saari kara tamar nadiif ah xilliyada dhibaatooyinka bani'aadamnimada.
Gran Canaria waxaa ka go'an kordhinta tayada tamarta iyo dib u cusbooneysiinta
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa mashruuc ku jira wajiga labaad ee Las Palmas de Gran Canaria oo ku saabsan waxtarka tamarta iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato?
Tamarta dabaysha ee Japan waxay soo martaa laba shirkadood oo Isbaanish ah
Laba shirkadood oo Isbaanish ah ayaa kala saxeexday heshiis lagu abuurayo HBS iyo in lagu fuliyo mashaariic tamarta dabaysha oo dul sabeysa teknolojiyadda SATH ee Japan.
Mid ka mid ah seddexdii kiiloow ee saacadood ee Isbaanish ah waxaa soo saara dib-u-cusboonaysiin
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa aragtida tamarta ee Isbaanishka iyo kororka tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Ma rabtaa inaad aragto sida tamarta u shaqeyso?
Ecocat, catamaran-kii ugu horreeyay ee Isbaanish ah ee ku shaqeeya tamarta qorraxda
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha ugu muhiimsan ee Ecocat, catamarankii ugu horreeyay ee Isbaanish ah ee ku shaqeeya tamarta qorraxda. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeyso?
Castilla-La Mancha waxay kabtaa tamarta la cusboonaysiin karo
Castilla-La Mancha waxay dhiirrigelin doontaa tamarta la cusboonaysiin karo iyo kaabayaasha waxtarka tamarta. Tamarta la cusboonaysiin karo ee la xushay waxay noqon doontaa tamar-dhuleedka, dabaysha iyo tamarta sawir qaadista si ay awood ugu yeeshaan guryaha, bulshada iyo shirkadaha.
Biomass oo ah isha tamarta Isbaanishka
Isbaanishka oo leh koritaankiisa joogtada ah ee biomass wuxuu isku filnaan karaa ilaa 28 maalmood iyada oo kaliya tamartaan dib loo cusboonaysiin karo. Si kastaba ha noqotee, aad ayaan uga fog nahay inaan gaarno jagooyinka sare, 132 maalmood tamar is-cunis.
Beerta dabaysha ee xeebta Iberdrola ee Wikinger horeyba waxay ugu xirnayd shabakadda
Iberdrola waxay bilawday Wikinger wind wind, halkeebay tahay, intee ayay awood leedahay, sidee loo dhisay? Waa maxay mashaariicda kale ee ay Iberdrola ku leedahay awooda dabaysha bada?
Isticmaalka dhuxusha iyo gaaska ayaa koray roobab yaraa awgood iyo rakibid la'aanta quwadda cusub ee la cusboonaysiin karo Waa imisa boqolkiiba isticmaalka dhuxusha? Maxay tahay boqolleyda isticmaalka cusboonaysiinta? Ma kordhin doontaa mustaqbalka? Kheyraadkee ayaa jira dalka?
Burlington waa magaaladii ugu horreysay ee Mareykanka ee si buuxda ugu shaqeysa tamarta la cusbooneysiin karo iyadoo leh isku-dhaf tamar oo la yaab leh.
Shirkadaha Jarmalku waxay bixiyaan lacagta isticmaalka korontada
Jarmalka ayaa maamusha inay qiimo dhimis ku sameyso biilasha korontada ee muwaadiniinteeda iyadoo gacan ka helaysa tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
ITC waxay baareysaa qalab cusub si loo hagaajiyo marawaxadaha dabaysha
ITC waxay kaqeyb qaadataa mashruuca AeroExtreme si loo soo saaro marawaxadaha dabaysha iska caabiya. Intee in le'eg ayuu mashruucani yahay? Sidee ayaa loo dhisay marawaxadaha dabaysha? Dhibaatooyin noocee ah ayay haystaan?
Cabildo de La palma waxay u qoondeyn doontaa € 200000 oo gargaar ah is-cunitaanka
La Palma waxay dhiirrigelin doontaa is-isticmaalka dadka deggan dhexdeeda, maxaa soo jeedintaada ah, ma keligeed Cabildo oo taageerta tamarta la cusboonaysiin karo? Maxay is-maamulka madax-bannaan ka qabaa tamarta nadiifka ah?
Beerta Iberdrola (Avangrid) ee Apple waxay isticmaali doontaa marawaxadaha Vestas
Iberdrola, iyada oo loo marayo hoosaadkeeda Avangrid, waxay dhisi doontaa beer dabaysha si ay tamar ugu siiso Apple.Maxay yihiin matoorrada ay isticmaali doonaan? Awood noocee ah ayey lahaan doonaan? Intee in le'eg ayey tahay muddada qandaraaska? Maxay yihiin shirkadaha kale ee saxiixa noocaan oo kale?
Joojinta dib u cusbooneysiinta ayaa qaali ugu noqon kara Spain
Joojinta mushaarka la cusbooneysiin karo ayaa uga qaalisan Boqortooyada Spain. Immisa abaalmarin oo sugeysa ayaa jirta? Waa imisa wadarta? Spain miyaa horey loogu xukumay inay bixiso?
Argentina waxay dooneysaa inay kordhiso wax soo saarkeeda cusboonaysiinta
Argentina waxay ku sharadaysaa qaab loo cusbooneysiin karo qaab muhiim ah. Tallaabooyin noocee ah ayay qaadeysaa? Waa maxay tamarta la cusboonaysiin karo ee ay adeegsan doonto
Awoodda dabaysha sannadka 2030 waxay siin doontaa in ka badan 30% koronto
Spain waxay dabooli doontaa baahida korantada 30% in ka badan iyada oo la adeegsanayo tamarta dabaysha, iyadoo ku guuleysan doonta 40.000 megawatts oo awood koronto ah.
Marawaxadaha dabaysha ee la deggan yahay qiimaha Smartphone-ka
Gudaha Hindiya laba walaalo ah ayaa soo saaray marawaxad dabaysha oo ah mid aad u jaban oo qiimaheedu yahay Smartphone si loo soo afjaro saboolnimada tamarta
Balanqaad balaaran oo dhowr jaaliyadood loogu talagalay dib u cusboonaysiinta
Ka dib dhowr sano oo wadaad ah, dhowr beelood oo ismaamula ayaa mar kale sharad ku galaya dib u cusbooneysiinta. Bulshodee ayaa leh awood dheeri ah?
Aragon wuxuu ku dhiirrigeliyaa dib-u-cusboonaysiinta beeraha dabaysha cusub iyo dhirta qorraxda
Tiro badan oo ka mid ah beeraha dabaysha ama rakibida sawir-qaadista si ka yar ayaa laga dhisayaa Aragon. Halkee ayay ku sugan yihiin? Awooddee ay leeyihiin? Maxay tahay shirkadda ugu muhiimsan ee Aragonese qaybta? Sidee ayey waaxdu u horumarisaa beeshan iskeed isu maamusha?
Batariga weyn wuxuu daboolayaa koronto la'aanta Koonfurta Australia
Shirkadda Tesla waxay batari ku rakibaysaa gobolka Koonfurta Australia si looga fogaado in si joogto ah loo dhexgalo shabakadda korantada, baytarigan ayaa noqonaya kii ugu weynaa adduunka illaa iyo hadda waxaana u sabab ah sharad uu ku galay twitter-ka.
Enel waxay soo saari doontaa tamarta ugu raqiisan adduunka ee Mexico
Enel waxay soo saari doontaa tamarta ugu raqiisan adduunka, gaar ahaan dhirta ku taal dalka Mexico.Waa maxay nooca tamarta la cusboonaysiin karo ee ay adeegsan doonto? Maxay ku kici doontaa, goorma ayay bilaabmi doontaa?
Mareykanka iyo Shiinaha hogaamiyeyaal buuxda ayay ka yihiin tamarta dabaysha
Shiinaha iyo Mareykanka waa hogaamiyaasha ugu fiican ee awooda dabaysha rakibtay, in kastoo dalal kale oo badan ay si xawli ah u korayaan Maxay yihiin? Aaway goobtii ugu weyneyd ee dabaysha?
Albacete waa gobolka soo saara tamarta dabaysha ee ugu badan Spain iyo tan saddexaad ee sawir qaadista
Albacete waxay ku jirtaa 1-da sare ee dhalinta korantada iyada oo looga mahadcelinayo dib-u-cusboonaysiinta. Waa maxay tamarta ugu muhiimsan? Waa maxay jardiinada ugu weyn Spain iyo halkee ku taal? Shirkaddee ayaa dhistay?
Brussels waxay yareyneysaa bartilmaameedka wax soo saarka la cusboonaysiin karo 27%
Golaha Midowga Yurub wuxuu maalmo ka hor ansaxiyay hadafkiisa ah inuu gaaro ugu yaraan 27% tamarta la cusboonaysiin karo marka la gaaro dhamaadka sanadka 2030, marka la barbar dhigo 35% uu difaaco baarlamaanka Yurub iyo xitaa Komishanka laftiisa. Isbedelkan?
Xayawaanada Canarian waxaa ka go'an tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Qoraalkan waxaad ku arki kartaa sida tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay u galeen waaxda xoolaha ee jasiiradaha Canary una oggolaadaan keydinta. Ma rabtaa inaad aragto sida?
Isha tamarta dabayshu waa dabaysha, laakiin sidee uga faa'iideysan karnaa? Si tan loo sameeyo, mashiinka dabaysha ama aerogenerator ayaa loo isticmaalaa.
Mashruuc Is-Waara Magaalooyin wuxuu ku dhashay Amazon
Mashruucani wuxuu sharxayaa tilmaamaha ay raacayaan Magaalooyinka Is-Waara ee Mashruuca Amazon (CASA). Ma rabtaa inaad ogaato waxa ku saabsan?
Dhaqanka korontada laga dhaliyo dalka Spain
Dalkeenu wuxuu leeyahay dhaqan weyn oo ah tamarta korontada laga dhaliyo, waxaa la soo saaray 100-kii sano ee la soo dhaafay. Aaway warshadihii korontada?
Isbaanishku waa inuu la kulmaa ujeeddooyinka cimilada ee kala-guurka tamarta
Isbaanishku wuxuu ubaahan yahay kala guur xagga tamarta ah oo ku saleysan tamarta la cusbooneysiin karo si loo gaaro ujeeddooyinka Heshiiska Paris. Sidee yeeli doonaa?
Brussels waxay Poland ka taageertaa tamarta dib loo cusboonaysiin karo
EC waxay ansixisay qorshe ku saabsan billion 10000 bilyan oo lagu horumarinayo dib-u-cusboonaysiinta gudaha Poland, kani waa waddanka ugu wasakhaysan Midowga
Hantida laga soo saaray dib-u-cusbooneysiintu miyey muhiim u tahay wax-soo-saarka gudaha Spain?
Tamarta cagaaran waxay kordhisay tabarucooda wax soosaarka guud ee qaranka waxayna si aad ah hoos ugu dhigtay qiimaha suuqa korontada. Immisa ayaa kordhay?
Magaalooyinka mustaqbalka, magaalooyinka caqliga badan
Siyaasiyiinta oo dhami waxay rabaan in magaaladoodu noqoto magaalo caqli badan, laakiin maxay ka kooban tahay? Waa maxay faa iidooyinkeedu? Maxay horumar ku leeyihiin
Muhiimadda ay leedahay hagaajinta waxtarka tamarta iyo hirgelinta tamarta la cusboonaysiin karo
Midowga Yurub wuxuu ansixiyay bartilmaameedyo cusub si kor loogu qaado waxtarka tamarta iyo dib u cusbooneysiinta ururka dhexdiisa Maxay yihiin oo ay yihiin kuwo hami leh?
Ku dhowaad XNUMX bilyan oo qof oo adduunka ah ayaa koronto la’aan ah
Dunida oo dhan, waxaa ku dhowaad hal bilyan oo qof oo ku nool koronto la’aan. Maxaa ku dhacaya dadka koronto la’aan ku hadhay?
Bioenergy loo isticmaalo gaadiidka waxaa la kordhin doonaa 4 jeer sanadka 2060
Qadarka tamarta tamarta dhaliya ee loo isticmaalo gaadiidka ayaa doonaya inay kordhaan si loola dagaallamo isbeddelka cimilada. Sideed yeeli doontaa
Mustaqbalka soo socda, tamar badan oo dib loo cusboonaysiin karo iyo saliid yar
Dhammaan warbixinnada hay'adaha caalamiga ah waxaa lagu muujiyey koboc aan la joojin karin oo ah tamarta la cusboonaysiin karo, maxay warbixintani leeyihiin?
Wasakheynta magaalada Madrid iyo xadeynta taraafikada
Nasiib darrose, xaddidaadda taraafikada ee Madrid wasakheynta darteed ayaa marba marka ka dambeysa ku soo badanaya. Maxay yihiin oo ma yihiin kuwa wax ku ool ah?
Ciyaartoy cusub oo adduunka ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo
Thanks to 3 xaraashka dowlada, shirkado badan ayaa umuuqday kuwa doonaya inay maalgashi ku sameystaan ​​cusbooneysiinta.maxay yihiin? Maalgashi noocee ah ayey sameyn doonaan? Goorma?
Waxaa jira dad wali sheegaya in tamarta qoraxda ay qaali tahay
Sanadihii la soo dhaafay, suuqyada tamarta adduunka oo dhan si aad ah ayey isu beddelayaan waxaana si sii kordheysa ugu sharraxeynaa dib-u-cusboonaynta
Siemens Gamesa waxay abuuraan marawaxadaha ugu horreeya ee dabaysha
Siemens iyo Gamesa waxay si wada jir ah uga shaqeynayaan sidii loo soo saari lahaa laba marawaxadaha dabaysha, oo ah labada ugu weyn ee abid shirkadaha ay abuureen.
Spain waxay kordhisay bartilmaameedyada tamarta dib loo cusboonaysiin karo ilaa 35%
Bartilmaameedka tamarta la cusboonaysiin karo ayaa laga kordhiyay 27% ilaa 35% marka la gaaro sanadka 2030. Bartilmaameedyadan ma yihiin kuwo hami leh ama aan ku filneyn?
AREH, waa mashruuca weyn ee la isku daro tamarta qoraxda iyo dabaysha
Tamarta cadceedda iyo dabaysha ayaa wada shaqeynaya si ay u dhashaan mashruuca AREH iyadoo lagu rakibayo 6.000 oo megawaat oo koronto ah.
Isbaanishka waxaa la siin karaa oo kaliya tamarta biomass ilaa dhamaadka sanadka
Isbaanishku wuxuu leeyahay awood weyn jiilka tamarta la cusboonaysiin karo ee biomass. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
Beeraha dabaysha ee adduunka
Waqtigaan la joogo meeye beeraha ugu waaweyn ee dabaysha adduunka? Ma seerayaal dhul ah ama jardiinooyin badda ka baxsan. Waa maxay mustaqbalka awoodda dabayshu?
Tesla wuxuu dhameystiray dhismaha batteriga adduunka ugu weyn
Elon Musk wuxuu la sharfay dowladda Australia in bateriga lagu dhisi doono 100 maalmood gudahood markii heshiiska la saxiixo. Hadaanay ahayn, waa bilaash.
Shaqaalaynta qaybta dib-u-cusboonaysiinta ee Isbaanishka
Nasiib darrose waaxda la cusboonaysiin karo ayaa sii wada burburintii shaqooyinka Spain, sidee ayey ugu socotaa adduunka intiisa kale?
Mashruuca Hondar iyo cawaaqibka ay walxaha ku yeeshaan nolosheena
Nasiib darrose walxaha sida balaastigga ama biraha ayaa burburiya baddeena. Mashruuca sida Hondar 2050 isku day inaad waxbarto dadka si looga fogaado
Colombia waxay si adag uga go'an tahay dib u cusbooneysiinta
Kolombiya wax badan ayey sharad ku dhigeysaa dib u cusbooneysiinta. Waxa kale oo jira dalal kale oo ku yaal Koonfurta Ameerika oo leh maalgashi ballaadhan. Waa kuwee?
Jasiiradaha Balearic waxay kordhinayaan awoodooda dib u cusboonaysiinta 25%, taas oo uga mahad celineysa 7 jardiinooyin qoraxda cusub.
Xaalufinta dhirta ee Amazon waxaa hoos u dhacay 28% marka loo eego sanadkii 2016
Maalmahan waxaa la qabanayaa Shirkii Cimilada ee Bonn (COP23) waxaana hadalhayn ku saabsan xaalufinta dhirta ee Amazon. Waa sidee aragtida?
Brussels waxay ansixisay gargaarka tamarta la cusboonaysiin karo
Komishanka Yurub (EC) wuxuu ogolaansho siiyay maamulka Isbaanishka oo ay ka jiraan xoogaa caawimaad dadweyne ah oo loogu talagalay rakibida tamarta la cusboonaysiin karo.
Kaydinta cadceedda waa nooc ka mid ah teknolojiyad casri ah oo awood u leh soo saarista tamarta qorraxda iyo dalagyada isla mar ahaantaana soo baxa. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato iyaga?
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Koonfurta Ameerika
Sannadihii ugu dambeeyay Latin America dhowr dib-u-habeyn xagga tamarta ah ayaa la bilaabay si loo helo kor u kac ku yimaada tamarta la cusboonaysiin karo.
Cepsa waxay horumarin doontaa beeraheeda ugu horreeya ee dabaysha ee Andalusia
Cepsa waxay ku shaacisay bayaan ay soo saartay inay heshay xuquuq ay ku horumarin karto beertoodii ugu horaysay ee dabaysha ee Jerez de la Frontera
Horumarka Ugu Dambeeyay Ee Awooda Dabaysha
Waxaan ognahay in tamarta dabayshu ay tahay tamarta kale ee la cusboonaysiin karo ee adduunka, waa maxay mustaqbalkeedu? Waa maxay horumarkoodu?
38 shatiyo cusub oo loogu talagalay beeraha dabaysha ee Almería
Dhowr sano ka dib markii arrintu istaagtay, Junta de Andalucía waxay leedahay 38 mashruuc oo laga dhisayo dabaysha dhuumaha. Maxay yihiin habraacyada, halkee ayay ku yaalliin?
Beertii ugu horreysay ee dabaysha sabaysa ayaa horay uga socota Badda Woqooyi
Beertan dabaysha sabaysa ee horusocodka leh waxay awood u leedahay 300 MW, taas oo awood u siin doonta inay tamar siiso 20.000 oo guri
Tesla wuxuu koronto dib ugu celiyey isbitaalka caruurta ee Puerto Rico
Tesla wuxuu ka caawiyaa Puerto Rico inay caadi ku soo noqoto, ka dib markii ay la kulantay 2 duufaanno bishii Sebtember. Aaway solaliyeyaashii lagu rakibay?
Baalal balanbaalis madow kordhiyaa waxtarka unugyada qoraxda
Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in baalasha balanbaalisyada madow ay kordhin karaan nuugista unugyada qoraxda ilaa 200%.
Khidmadaha loo cusbooneysiin karo dib-u-cusbooneysiinta ayaa laga joojin doonaa Australia, dhammaantood si loo yareeyo qiimaha korontada. Ayaa taageeraya tallaabadan?
Iibinta gawaarida korantada ee cajiibka ah bishii Sebtember
Iibinta gawaarida korontada ku shaqeeya ee Spain bishii Sebtember ee la soo dhaafay, maxay tahay sababta? Maxay yihiin rajooyinka laga qabo waaxda?
Soria, janada biomass
Laga soo bilaabo 2015, Soria gaaska ama kuleyliyaha naaftada waxaa lagu beddelay kuwa kale biomass si loo helo biyo kulul iyo kululaynta
Afar dal 100% dib loo cusboonaysiin karo
Iyagoo ka faa’iideysanaya kheyraadkooda dabiiciga ah, dalalka qaar waxay ka dhigeen riyadii ahayd inay helaan 2017% il tamar dib loo cusboonaysiin karo sannadka 100. Maxay yihiin?
Cusboonaysiinta waxay waydiisanayaan inay ciqaabaan kuwa wasakheeya
Iyada oo saldhig u ah Sharciga Isbadelka Cimilada iyo Sharciga Kala-guurka Tamarta, dhowr hay'adood ayaa ku baaqaya in canshuuraha adag laga qaado teknoolojiyadda wasakheynta.
Adduunku wuxuu indhaha ku hayaa Argentina si loo horumariyo cusboonaysiinta
Maalmahan shirweynihii Airec 2017 waxaa lagu qabanayaa Argentina, oo ah dal fursado badan ku leh qaybtan.Sidee mustaqbalkaagu u ekaan doonaa?
Waxa aan ka filan karno awoodda dabaysha
Waqtigaan, kaliya 4% jiilka tamarta adduunka waa tamarta dabaysha. Waa maxay rajooyinka? Maxay soo kordhin karaan marawaxadaha dabayshu?
Tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'Photovoltaic tamarta', waa hoggaamiyaha la cusboonaysiin karo
Tamarta qorraxda ayaa hogaamiyaha u ahayd dib u cusbooneysiinta sanadkii hore, taasi ma waxay ugu wacan tahay qiimaha hoose? Maxay tahay mustaqbalkiisa iyo rajadiisa?
Shiinaha ayaa hogaaminaya horumarka tamarta la cusboonaysiin karo ee adduunka
Tamarta cadceedda ee loo yaqaan 'Photovoltaic tamarta qorraxda' waa tan xilligan oo dhan aad u koray, Shiinuhuna waa midka horseedka u ah tamarta la cusboonaysiin karo.
Caqabada tamarta la cusboonaysiin karo
Tamarta la cusboonaysiin karo laguma keydin karo ama lama geyn karo meelo ka fog wax soo saarkooda. Maxay dunidu damacsan tahay inay sameyso iyadoo wajahaysa caqabadan?
8000 bilyan oo maalgashi oo cusub oo adduunka dib loo cusboonaysiin karo ah
8GW ee awooda la siiyay waxay ubaahantahay maalgashi dhan 8000 bilyan oo yuuro.Sheekeebaa shirkado ah oo ka faa'iideystay? Iyo kuwa waxyeelada soo gaadhay?
Saamaynta duufaanka ee suurtogalka ah ee cabashooyinka ku saabsan dhimista dib loo cusbooneysiin karo
Horeyba waxaa ujiraa in kabadan 30 heshiisiin kadhan ah Spain ururada kaladuwan, laakiin kaliya maalgashadayaasha ajaanibta ah ayaa u tagi kara iyaga, maxaa natiijadu noqon doontaa?
Xogta Weyn waa erey aad mooddo maanta, macnaheedu waa ururinta ballaaran ee xogta si loo helo qaab. Waxtar ma u yeelan doontaa cusboonaysiinta?
Tamarta dhulka hoostiisa waa tamar dib loo cusboonaysiin karo oo lagu helo iyadoo laga faa'iideysanayo kuleylka ka jira gudaha dhulka. Maxay yihiin faa'iidooyinkiisa iyo waxyeellooyinkiisa?
Citibank wuxuu qorsheynayaa inuu isticmaalo kaliya tamarta la cusbooneysiin karo sanadka 2020. Waxaa sidoo kale jira shirkado kale oo ku boodaya howsha, ma ogtahay waxa ay yihiin? Cusboonaysiinta ayaa ku jira moodada
Isbaanishku wuxuu wajahayaa dhamaadka nolosha waxtarka leh ee beeraha dabaysha
Isbaanishka, ku dhowaad kalabar 23.000 MW oo hadda lagu rakibay waddanka waxay ka badnaan doontaa 2025 sano jiritaan ah 20. Ma kordhin doonaan nolosha waxtarka leh?
Cyclalg wuxuu kahelaa 12ka kilogram ee ugu horreeya biomass-ka microalgae
In kabadan 10 kg oo biomass ah ayaa lagu helay iyada oo loo marayo microalgae la beeray taas oo horumar ka samayn doonta biomass iyo joogtaynta.
Ma xoqin kartaa loo isticmaali karaa abuurista tamarta noolaha?
Suurtagalnimada in la isticmaalo xoq si loo abuuro tamar ayaa dib looga fikiray. Miyey loo isticmaali karaa duurkaas inay il ahaan uga soo baxaan kululeeyayaasha biyo-biyoodka?
Powerwall 2, jiilka labaad ee baytariyada Tesla
Tesla Powerwall 2 waa jiilka labaad ee batteriga caanka ah ee Tesla Powerwall, goorma ayaa laga heli doonaa Spain? Iyo qiimahee?
Maxkamadda Sare waxay ku raacsan tahay dowladda dacwadda la cusbooneysiin karo
Maxkamadda Sare waxay sii wadaa inay dib u dhigto maalgashadayaasha sheeganaya dhimista la cusboonaysiin karo, dhinaca kale, ICSID ayaa kula heshiisay iyaga.
In ka badan ayaa lagu maalgeliyaa waxtarka tamarta marka loo eego shidaalka
Daraasad lagu soo bandhigay magaalada Madrid ayaa muujineysa in maalgashiga tamarta adduunka uu hoos u dhacay 12% sanadkii 2016 isla markaana ay kordheen maalgashiga waxtarka tamarta.
Meerahu wuxuu u baahan yahay tamar badan oo dib loo cusboonaysiin karo
Rafcaan ayaa la sameeyay si looga digo in habka kala guurka tamarta ay tahay in la dedejiyo, maaddaama meeraha dalbanaayo inaan si dhaqso leh wax uga qabanno.
Tamarta laamaha Bankia waxay noqon doontaa 100% dib loo cusboonaysiin karo
Nexus Energía wuxuu siin doonaa 100% tamarta Bankia, intaas oo dhanna waxay noqon doonaan asal ahaan la cusboonaysiin karo. Shirkadaha kale waxay bilaabeen inay raacaan isla wadadaas.
Canshuurta ceebta, faanka Spain
Cashuurta ceebta, waxaan nahay wadanka kaliya ee cashuurta laga qaado cadceedda. Muxuu ka kooban yahay? Waxaan kuu sheegeynaa sida ay kuu saameyneyso, qiime intee la eg ayuu yeelan doonaa?
Citi, waa banki ku hamiya inuu ku shaqeeyo 100% tamar dib loo cusboonaysiin karo
CitiBank waa bangi ay ka go'an tahay yareynta saameynteeda deegaanka ujeedkanna uu damacsan yahay inuu ku daboolo baahidiisa tamar dib loo cusboonaysiin karo.
3 tikniyoolajiyadaha kacaanka ee ku saleysan tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Maanta waxaan arki doonnaa seddex nooc oo tikniyoolajiyado kacaan ah oo naga caawin doona inaan si wanaagsan ula noolaano deegaanka isla markaana looga faa'iideysto kheyraadka.
3 sano kadib, tamarta la cusboonaysiin karo mar labaad ayey koraan
Xaraashyada tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee dhowaan la qabtay. in ka badan 8 GW ayaa la siiyay, taas oo mustaqbalka dhow sababi doonta dib u howlgelinta waaxda.
Mustaqbalka tamarta, maxaa ina sugaya?
Mustaqbalka dhow, waxay noqon doontaa tamarta la cusboonaysiin karo iyo ilaha kale ee tamarta ee adduunka xukumi doona. Teknoolojiyadee noo caawin doonta tamar ahaan?
Hirar tamar ama mawjad tamar
Mid ka mid ah tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee looga faa’iideysan karo badda waa tamarta mowjadaha, oo sidoo kale loo yaqaanno tamarta mowjada.
Teedka tamarta ama tamarta hirarka
Baro sida ay u shaqeyso iyo astaamaha farsamo ee tamarta dabaysha iyo dhirta tamarta. Yaabka farsamada
Isbedelka biomass ee Isbaanishka
Isbeddelka biomass ee dalka Spain tobankii sano ee la soo dhaafay? Xagee joognaa xagee ku socotaa Waa maxay rajadaada iyo mustaqbalkaagu?
Marawaxadaha dabaysha ee bilaa biraha ah
Si looga fogaado saameynta aaladaha iyo in laga fogaado abuurista qashinka, mashaariicda loogu talagalay marawaxadaha dabaysha ee aan lahayn boog.
Mashiinka marawaxadaha dabayshu waa nooc cusub oo qashin soo baxaya
Qiyaastii 4.500 gar oo ay adeegsadaan marawaxadaha dabaysha si ay u soo saaraan tamarta dabaysha mar dambe sii haboonaan maayaan waana in la daaweeyaa 8da sano ee soo socota
Warshad kuleylka qoraxda ee ugu weyn adduunka ayaa ku yaali doonta Australia, awooddiisu maxay ahaan doontaa? faa'iidooyinka iyo khasaaraha? sidee u shaqeysaa, imisana ku kacaysaa?
Jasiiradaha Canary iyo Azores waxay iska kaashan doonaan arrimaha dib loo cusboonaysiin karo
Jasiiradaha Canary iyo Azores waxay kala saxeexdaan heshiis wada shaqeyn, cilmi baaris iyo horumarineed oo dib loogu cusboonaysiin karo. Canarias waxaa ka go'an inay bedesho qaabkeeda tamarta
Tamarta baddu waxay kaloo dhalisaa tamar la cusboonaysiin karo
Baduhu waxay leeyihiin awood aad u balaaran oo ay ku soo saari karaan tamar, sida mowjadaha, hirarka ama cusbada cusbada. Ma ogaan doonaa sida loo isticmaalo?
Waa maxay cashuurta qorraxdu? Waxaan kuu sheegeynaa sida ay kuu saameyneyso, waxa ku kici doona, xaaladda waddamada kale ee Yurub iyo in ka badan. Ma taqaan sharcigan?
Iftiinka Galicia, kala badh u dhexeeya dib u cusboonaysiinta iyo dhuxusha
Galicia waa ismaamulka 3aad ee awooda tamarta la cusboonaysiin karo, laakiin 31% wax soo saarkeeda waxaa lagu sameeyaa dhuxul, ku dhowaad laban laab celcelis ahaan Isbaanishka.
Waa maxay tamar-dhuleedka, nidaamyada qaboojiyaha iyo mustaqbalka
Ogow dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah tamar-dhuleedka iyo sidoo kale nidaamyada qaboojiyaha, adeegsiga, qaybinta iyo mustaqbalkiisa.
Batariga Tesla Powerwall 2
Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan Tesla Powerwall 2, jiilka labaad ee batteriga Tesla. Muxuu kaga duwan yahay qaabkii hore?
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay ku kordheysaa 20% 2-dii sano ee ugu dambeysay Jasiiradaha Canary
Labadii sano ee la soo dhaafay, tamarta dabaysha ee lagu rakibay jasiiradaha Canary waxay kordhay 2%, in kabadanna way kordheysaa iyada oo ay mahadsantahay FDCAN, oo maalgelin doonta 20 mashruuc oo cusub.
Qorraxda bitcoin waxaa loo yaqaan SolarCoin
SolarCoin (SLR) waa lacagta loo yaqaan 'cryptocurrency' oo la bilaabay Janaayo 2014, waxay isku dayeysaa inay horumariso horumarka caalamiga ah ee tamarta qoraxda iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada Blockchain.
Helitaanka deebaajiga baabuurka korontada ku shaqeeya ayaa 5 jeer ka jaban kan shidaalka
Buuxinta batteriga baabuurka korontada ku socdaalaya 100 km waxay noqon kartaa ilaa 80% ka raqiisan kan ku kaxeynta gaariga shidaalka
Hawo wasakheynta ayaa ah arin hada taagan oo bilaabeysa walaac fara badan, maadaama dadku aad ugu baraarugeen
Dhibaatada wasakheynta badda
Waxaan nahay meesha ugu sareysa ee loo dalxiis tago, laakiin ka taxadarka wasakheynta aan ku soo saarno xeebta ayaa muhiim u ah sii wadista ku raaxeysiga sanad walba
Dhinacyada la tixgelinayo marka la maal-galinayo tamarta la cusboonaysiin karo
Dad aad u tiro badan ayaa maalgashanaya horumarinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Maxaad samaynaysaa haddii aad rabto inaad ku sharraxdo tamarta la cusboonaysiin karo?
Waxay soo saaraan baalayaal ku shaqeeya cadceedda oo ku shaqeeya dabar hooseeya
Saynisyahanno Shiineys ah ayaa soo saaray baalayaal qoraxda ku shaqeeya oo awood u leh inay soo saaraan koronto maalmaha daruuraha, roobka, ceeryaanta ama xitaa habeenkii.
5-ta dhirta korontada ugu weyn adduunka
Hydropower waa isha ugu horeysa ee dib loo cusboonaysiin karo. Xilligan awoodda la rakibay waxay ka badan tahay 1.000 GW waxsoosaarkiisuna wuxuu gaarayaa 1.437 TWh
Isbarbardhiga noocyada kala duwan ee nalalka
Waxaan arki doonnaa noocyada kala duwan ee nalalka nalalka, astaamahooda, isticmaalkooda, qiimaha ay ku fadhiyaan ...
Biyo xireenka Saddexda Gorges, oo ah kan ugu weyn adduunka
Biyo-xireenka Saddexda Gorges waa warshad ugu weyn ee korantada ka dhalisa meeraha, waxayna ku fidday laba kiilomitir ballac ah oo dhererkeedu yahay laba kun oo mitir
Galicia waxay dhiirrigelin doontaa rakibidda in ka badan 4.000 kululeeyaha biomass-ka
Dhamaadka sanadka 2017, Xunta de Galicia waxay taageeri doontaa rakibida in ka badan 4.000 biyo kululeeyaha guryaha.
Waa kuwee waddammada ugu soo saarayaasha tamarta dib loo cusboonaysiin karo?
Wadamada soo saara korantada ugu cusbooneysiinta waa Norway iyo New Zealand, waxay soo saaraan 97,9% iyo 84% korantadooda tamar cagaaran.
7-da dhir ee ugu weyn ee laga dhaliyo biyaha koronto
Astaamaha farsamo, goobta iyo meesha ay ku yaalliin 7-da geed ee ugu weyn tamarta korontada ee dalka, oo asal ahaan ay maamusho shirkadda Iberdrola.
Murcia waxay ku kordhisaa tamarta dib loo cusboonaysiin karo gargaar iyo kabid
Murcia waxay bilaabi doontaa inay siiso gargaar dhan seddex milyan iyo badh yuuro dhamaan kaydinta, hufnaanta tamarta iyo mashaariicda tamarta la cusboonaysiin karo.
Tamarta korantada ee Spain
Isbaanishku wuxuu leeyahay awood koronto oo weyn, tan waxaa lasameeyay 100 sano. Tan awgeed waxaan leenahay nidaam weyn oo koronto-koronto.
Beer cusub oo dabaysha ka socota badda Ingiriiska oo ay dhiirrigelisay Iberdrola
Iberdrola waxay heshay dhammaan rukhsadaha dhismaha East Anglia Saddex dabaysha badda ka baxsan. Taas oo yeelan doonta awood gaadheysa ilaa 1.200 MW
Qiiqa gaaska lagu sii daayo ayaa cirka isku shareeray abaarta darteed
Biyo la'aantan qoyaanka ayaa kicisay qiiqa gaaska lagu sii daayo Qeybtii hore ee sanadka, waaxda ayaa ceyrisay 17,2 milyan oo dheeraad ah.
Schiphol iyo 3 garoon diyaaradeed oo kale oo Nederland ah ayaa ku shaqeyn doona cusbooneysiin kali ah sanadka 2018
Gegooyinka diyaaradaha Schiphol (Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam iyo Lelystad) waxay si gaar ah ugu shaqeyn doonaan tamarta la cusboonaysiin karo laga bilaabo 1da Janaayo.
Isbaanishku wuxuu yareeyaa qiiqa gaaska ee ay sii daayaan mahadsanid cusboonaysiinta
Isbaanishku wuxuu soo saaray gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ka yar sanadaha kale iyadoo ay ugu wacan tahay isticmaalka dib loo cusboonaysiin karo.
Spain waxay ku soo laabatay sharad tamarta la cusboonaysiin karo
Dhowr sano oo cabsi badan ka dib waaxda, waxay umuuqataa inay arkeen iftiinka 3dii xaraash ee ugu dambeysay ee la qaaday si loo fuliyo ujeeddooyinka EU.
228 milyan oo ka mid ah Canary Islands Fdcan ayaa loo isticmaali doonaa 90 mashruuc oo dib loo cusboonaysiin karo
Thanks to the Canary Islands FDCAN, qaar ka mid ah 90 mashruuc oo lagu hagaajinayo maaraynta tamarta ee jasiiradaha kala duwan ayaa heli doona maalgelin dhan € 228 milyan.
Waxyaabaha lagu beddeli karo marawaxadaha dabaysha dhaqameed
Iyada oo gacan laga helayo horumarka tikniyoolajiyadda iyo fikradaha hiddaha, waxaan ku raaxeysan karnaa beddelaado kala duwan oo ku saabsan marawaxadaha dabaysha ee caadiga ah.
Scotland waxay furaysaa beer dabaysha sabaysa oo 25 km u jirta xeebta
Scotland waxay furaysaa beer dabaysha sabaysa oo 25 km xeebta u jirta, in kastoo xilligan kaliya hal marawaxad la rakibay 4 kalena la filayo in la rakibo.
1000 dhismayaal dowladeed ah ayaa iskood ugafilan doona magaalada Barcelona sanadka 2018
ku dhowaad 1000 dhismayaal dowladeed iyo laydhadhka jidadka magaalada waxaa bixin doona suuqgeyaha tamarta mustaqbalka
Nicaragua, oo ay weheliyaan Costa Rica iyo Sweden, iyo Nicaragua, waa hogaamiyaasha aduunka ee jiilka iyo hirgelinta korantada la cusboonaysiin karo.
Nidaamka gaadiidka dadweynaha wuxuu bilaabay inuu casriyeeyo isagoo soo bandhigaya tamarta la cusboonaysiin karo, in kasta oo gaariga korontada ku shaqeeya uu yahay mashiinka ugu weyn ee horumarka.
Boortaqiisku wuxuu maareeyaa inuu shaqeeyo ku dhowaad hal usbuuc kaliya tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Dhamaan Bortuqiiska waxay ku shaqeynayeen 4 maalmood tamar tamar dib loo cusboonaysiin karo. Waa markii ugu horreysay ee waddan horumaray uu adeegsado keliya dib-u-cusboonaysiinta muddo aad u dheer.
Haddii tamarta qoraxda la helo, qiimaha nalka ayaa ka jaban 36%
Haddii Isbaanishku rakibi lahayd isla awoodda sawir-qaadista ee Jarmalku leeyahay, qiimaha korontadu wuxuu noqonayaa mid 36% ka jaban.
Tesla wuxuu ku biirayaa inuu isticmaalo baytariyada leh tamarta dabaysha ee ka timaada badda
Tesla iyo Deepwater Wind waxay ku biireen xoogag si ay u abuuraan goob dabaysha laga helo si ay u siiso xeebta beerta canabka ah ee Martha iyada oo ay sii dheer tahay inay awoodaan inay keydsadaan tamarta dabaysha
Tareenno isku dhafan oo leh laydhadhka cadceedda ayaa ka bilaabanaya dalka Hindiya
Tareenada Hindiya waxay qaadaan maalin kasta 23 milyan oo qof iyo 2,65 milyan tan oo alaab ah. Tiradaas baaxadda leh waxay u baahan tahay isbeddel moodel ah
Iran waxay sare u qaadeysaa ballanqaadkeeda tamarta la cusboonaysiin karo
Iran waxay leedahay awooda wax soo saar tamarta la cusboonaysiin karo ee Bariga Dhexe, sida dabaysha, biyo-dhuleedka, korontada, qoraxda iyo kuleylka
Google waxay dooneysaa inay isticmaasho milix si ay u keydiso tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Google waxay dooneysaa inay ku sharaddo isticmaalka cusbada iyo qaboojiyaha si ay u keydiso tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee aan khasaarinayno.
Caadi ahaan, wasakheynta biyuhu waxay ku dhacdaa iyada oo si toos ah ama aan toos ahayn looga sii daayo ilaha biyaha ee walxaha wasakhaysan ee kala duwan.
Kororka weyn ee gawaarida korantada ee Shiinaha
Maalmahan, gawaarida korontada ku shaqeeya waxaa lagu iibiyaa Shiinaha marka loo eego adduunka oo dhan. Waxaa jira kor u kac dhab ah dhammaan noocyada gawaarida korontada ku shaqeeya.
Xaaladda tamarta la cusboonaysiin karo ee Isbaanishka iyo aragtiyada 2020
Hadda waxaa jira seddex bartilmaameed oo tamar ah, oo ay tahay in lagu xisaabtamo suuqa Yurub illaa 2020 (waxa loogu yeero "saddex jibaar 20")
Xaraashka la cusboonaysiin karo wuxuu abuuri doonaa ku dhowaad 58.000 oo shaqo cusub
Thanks to xaraashka tamarta la cusboonaysiin karo ee la qabtay, Spain waxay la kulmi doontaa koronto cusub oo ku saleysan tamar nadiif ah.
Sababaha iyo dhibaatooyinka wasakheynta hawada
Soo ogow dhibaatooyinka halista ah ee caafimaadkaaga wasakheynta hawada iyo waxa aan wadajir ugu qaban karno xallinta.
ACS guusha weyn ee xaraashka ugu dambeeya ee dib loo cusboonaysiin karo
ACS waa guuleyste xaraashka tamarta la cusboonaysiin karo. 1550MW oo ah sawir-qaadis ayaa la siiyay. Forestalia iyo Enel sidoo kale waxay heleen qaybtooda keegga
Natiijooyinka xaraashka tamarta la cusboonaysiin karo
Ugu dambayntii waan ognahay natiijada xaraashka awoodda la cusboonaysiin karo. Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato natiijooyinka xaraashkan?
Filashada ugu badan ee xaraashka saddexaad ee dib loo cusboonaysiin karo
Xaraashku wuxuu hayaa isla shuruudo ku saabsan qoondaynta xukuntay bishii Maajo oo ay si adag ugu tartamayaan dhiirrigeliyeyaasha sawir qaadeyaasha,
Dhirta qoraxda oo sabaynaysa
Dhirta qoraxda ee sabaynaysa ayaa bilaabay inay soo baxaan sanadihii la soo dhaafay. Qaabkeedu wuxuu la mid yahay kan beeraha dabaysha ee badda
Faa'iidooyinka cajiibka ah ee tamar-dhuleedka!
Waa il aan la koobi karin oo tamar ah 365 maalmood sanadkiiba, kana duwan nidaamyada kale, xaaladaha saadaasha hawada ee xilligan saameyn kuma leh.
Xirnaanshaha dabaysha Catalonia waxay socotey in ka badan afar sano
Xirnaanshaha dabaysha ayaa in ka badan afar sano ka jirtay Catalonia. Bishii Janaayo 2013, beertii ugu dambeysay ayaa la furay, tan iyo markaas hal MW looma xilsaarin.
Faransiisku wuxuu xidhayaa 17 matoor soo saarayaasha nukliyeerka sanadka 2025
Kacaankii Macron wuxuu ku imanayaa dhammaan qeybaha Faransiiska. Dowladdu waxay ku dhawaaqday suurtagalnimada in la xiro 17 ka mid ah kuwa soo saaraya nukliyeerka kahor 2025.
Saddex meelood laba meel tamarta lagu cunay El Hierro bishii Juun ayaa la cusbooneysiin karaa
El Hierro Hydroelectric Power Plant waxay bixisay 62% korantada jasiiradda intii lagu jiray Juun, taasoo muujineysa daqiiqado ay ku gaadhay 100% tamarta.
Markii ugu horreysay, inbadan ayaa lagu maalgeliyay waaxda korantada
Waa markii ugu horreysay ee lacag ka badan la geliyo korontada marka la barbardhigo shidaalka. Tani waxay gacan ka geysaneysaa kala-guurka tamarta.
Ogow waxa biofuel tamarta u yahay iyo maxay yihiin faa'iidooyinka ama faa'iido darrooyinka tamarta la cusboonaysiin karo ee maalin walba la isticmaalo.
Kobaca aan la joojin karin ee cusboonaysiinta
Warbixintii ugu dambeysay ee ay soo bandhigtay Ururka REN21 waxay muujineysaa koritaanka aan la joojin karin ee dib loo cusbooneysiin karo, mustaqbalkooda mustaqbalka iyo mustaqbal wanaagsan.
Khidmadaha la cusbooneysiin karo ee dib loo cusbooneysiin karo ayaa hoos u dhacaya si loo yareeyo qiimaha korontada
Dawladdu waxay dib u eegi doontaa faa'iidada macquulka ah ee dib-u-cusboonaysiinta laga bilaabo 2020, waxay dooneysaa inay hoos u dhigto khidmadaha si hoos loogu dhigo qiimaha korontada illaa 10%
Dhibaatooyinka deegaanka ayaa saameeya ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Waxaan sharaxeynaa sida dhibaatooyinkaani u saameeyaan isticmaalka tamarta waarta
Qiimaha tamarta qoraxda ayaa hoos udhacaya 27% sanadka 2022
Qiimaha tas-hiilaadka tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qoraxda' iyo maalgashiga ayaa hoos u sii socon doona illaa 27% marka la gaaro sanadka 2022
Qeybta beeraha waxay uruurisaa 25% tamarta qoraxda
Qeybaha beeraha iyo waraabka ayaa durbadiiba uruurinaya 25% ee warshadaha tamarta qoraxda ee loo adeegsado isticmaalka nafta
Kalifoorniya waxay soo saartaa tamar aad u badan oo qorraxda ah
In badan oo tamarta qorraxda ah waxaa soo saaray Kalifoorniya oo waa inay bixiyaan dawladaha deriska si ay u nuugaan wax soo saarkooda dheeraadka ah.
Xaraashka tamarta la cusboonaysiin karo ee soo socda wuxuu noqon doonaa 26-ka Luulyo
Kadib guushii xaraashkii ugu dambeeyay, dowladdu waxay ku dhawaaqday mid kale oo ah 3000MW bisha Luulyo 26keeda, sharciyadu waxay la mid noqon doonaan kuwii hore.
Sida loo yareeyo kharashka rakibaadda tamarta qorraxda
Mid ka mid ah cilladaha ka dhalan kara sharadka tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa ah kharashka ugu horreeya ee maalgashiga ee ay leeyihiin Isku day ayaa la sameeyay si loo yareeyo kharashyadaas.
Shiinaha ayaa ku soo kordhay iibinta gawaarida korontada ee jaban
Baabuur badan oo koronto ku shaqeeya ayaa durba lagu iibiyaa Shiinaha marka loo eego adduunka intiisa kale. Waxaa jira kor u kac ku yimid gawaarida korontada ee jaban, hadda iyo mustaqbalka waaxda
Wasakhowga hawadu wuxuu yareeyaa waxtarka tamarta qoraxda
Wadamada sida aadka ah u wasakhaysan, wasakhaynta hawadu waxay dhibaato weyn ku tahay maalgashiga rakibida tamarta qoraxda,
Waxaa la fasaxay warshad cusub oo 300 MW ah oo ku taal Talaván (Cáceres)
Warshadan cusub ee 300 MW Talaván ayaa leh maalgashi dhan 331,8 2000 milyan, in ka badan XNUMX oo shaqo ayaa la abuuri doonaa inta ay socoto dhismaha.
Dhibaatada wasakheynta biyaha
Wasakhaynta biyuhu waa dhibaato weyn oo soo foodsaartay dad badan, qashinka, daadashada, sunta cayayaanka iyo sharciyeyn yar ayaa sababaha qaar ka mid ah.
Is-cuniddu isku mid ma ka tahay dhammaan waddamada Yurub?
Is-cunitaanka ayaa Midowga Yurub u aqoonsan yahay mid ka mid ah cunsurrada ugu muhiimsan ee isticmaalka tamarta. Ma isku si ayey uga shaqaysaa dhammaan waddammada oo dhan?
Trump wuxuu rabaa inuu ku dhejiyo darbiyada darbiyada Mexico
Madaxweynaha Mareykanka Trump wuxuu ku fikirayaa inuu dhiso darbi qorraxda si uu u abuuro tamar. Marka loo eego Mexico, waxay ku bixin lahayd lacag aad uga yar darbiga.
Dawladdu waxay dib u eegi doontaa faa'iidada laga heli karo dib-u-cusbooneysiinta sanadka 2020
Dawladdu diyaar uma aha inay ilaaliso 'faa'iidada macquulka ah' ee hadda jirta, dhammaadka muddada ugu horreysa ee sharci-dejinta 2014-2019 waxay hoos u dhigi doontaa lacagta caymiska.
Jasiiradaha Canary waxay noqon doonaan barxad caalami ah oo lagu tijaabiyo cusboonaysiinta
Waxaa loogu talagalay in tamarta dabaysha ee badda lagu tijaabin karo sida ugu macquulsan uguna macquulsan uguna rogi karto jasiiradaha Canary jaangooyooyin tijaabo ah.
Tamarta la cusboonaysiin karo waxay ku dhowdahay inay shaqooyin ka abuurto Jarmalka 400000
Tamarta la cusboonaysiin karo waxay abuurtaa tiro badan oo shaqooyin tayo leh. Qeybta waxaa ka shaqeeya dad badan oo Mareykanka ah marka loo eego gaaska, saliida iyo dhuxusha oo la isku daro.
Cusboonaysiinta ayaa ka caawin kara hirarka kuleylka
Is-cunitaanka Isbaanishka ayaa si xun u dhaawacmay. Si kastaba ha noqotee, tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta hirarka kuleylka.
Sidee Uruguay u noqotay dal horseed u ah tamarta dabaysha
Sidee dal yar oo aan saliid lahayn hoos ugu dhigi karaa qiimaha korontodiisa, una yarayn karaa ku tiirsanaanta saliidda una noqon karaa hoggaamiye tamarta dabaysha?
In ka badan 50 waddan, tamarta qorraxda ayaa ugu jaban dhammaan.
Suuqyada tamarta adduunka ayaa si isdaba joog ah isu bedelayay in muddo ah hada, laakiin markan waxay gaareen heer ay adag tahay in laga adkaado.
Godadka saytuunku waa isha tamarta ee hudheelada
Awoodda dib loo cusboonaysiin karo waxaa ka mid ah noolaha noolaha. Dhagaxa saytuunka wuxuu u adeegaa sidii shidaal si uu tamar uga soo saaro biomass.
Waxaan heli doonnaa xaraash cusbooneysiin ah
Wasiirka Tamarta, Dalxiiska ayaa soo bandhigay xaraash cusub, dalabkan cusub wuxuu noqon doonaa 3.000 oo megawaat waxaana loo qoondeeyay dabeyl iyo tamar
Adduunku wuu ka daalayaa dhuxusha
Adduunku wuu ka daalay dhuxusha. Waa mid ka mid ah ilaha ugu wasakheynta badan, dhaqaale ahaan hadda sidii hore uma sii socon karto. Isticmaalkaaga ayaa hoos u sii dhacaya
Waa maxay Dogger Island? Jasiirad macmal ah oo u soo saari doonta tamar la cusboonaysiin karo 80 milyan oo qof.
Jasiiradda Dogger waa mashruuc jasiirad macmal ah, waxay siin kartaa tamar la cusboonaysiin karo 80 milyan oo qof oo ku nool Yurub sannadka 2050. Qiso dhab ah ama saynis?
Rikoor cusub oo ku yaal Dubai qiimaha tamarta kuleylka kuleylka
Dewa waxay ku dhawaaqday qiimaha ka hooseeya 10 qaybood oo ka mid ah daladaha doorta wejiga afraad ee 200 MW ee Mohammed bin Rashid CSP.
6 Sababaha loo doorto tamarta la cusboonaysiin karo
Wali ma isticmaaleyso tamarta dib loo cusboonaysiin karo? Waxaan ku siineynaa 6 sababood oo qasab ah oo ah inaad joojiso isticmaalka shidaalka foosha oo u boodbooda ilaha tamarta waara.
Waa maxay ra'yiga ay EPA ka qabto isbeddelka cimilada?
Trump wuxuu umuuqdaa inuu diirada saaray dadaal burburin weyn oo kusaabsan waxkasta oo laxiriira arimaha deegaanka. Gaar ahaan isbeddelka cimilada
Tamarta qiimaha jaban ee Ingriiska dabayl daran awgeed
Waad ku mahadsantahay dabaysha ka socota London Array dabaysha xeebta, qiimaha tamarta ayaa gaadhay -19,25 rodol halkii MWh wuuna xumaa 5 saacadood
Dawladdu waxay ku soo noqotaa inay ka faa'iideysato tamarta dabaysha xaraashka xiga
Wasaaradda Tamarta ayaa u dirtay CNMC qabyo-qoraalka lagu xakameynayo xaraashka 3GW ee dib-u-cusbooneysiinta, iyadoo rajeyneysa in lagu xirayo iyada oo aan lacag looga qaadin nidaamka.
Taariikhda tamarta dabaysha
Tan iyo wakhtiyadii hore, bani aadamku wuxuu dabaysha u isticmaali jiray hawlo badan. Taariikhda tamarta dabaysha waxaa ka buuxa dhacdooyin waaweyn, sidee isu beddeshay?
Ganacsiga qoyska ee ku guuleystey xaraashka cusboonaysiinta (Norvento)
Shirkadda Galician ee walaalaha Fernández Castro waxaa la siiyay 128 MW oo ah dabaysha. Norvento waxay baraneysaa qandaraaska xaraashka xiga. Mustaqbalka dabaysha